08:32 Gmail, MM Font Keyboard Error များအတွက်, နည်းပညာ No comments
မိမိနားထောင်နေသော သီချင်း Gtalk staus တွင် ပေါ်အောင်လုပ်နည်း
Gtalk staus တွင် မိမိနားထောင်နေသော သီချင်းပေါ်ချင်လျှင်
windows media ကိုဖွင့်ပါ
plug ins အောက်တွင် background ကိုရွေးပါ
တဖက် box လေးထဲတွင် google talk music plugin ကို အမှတ်ပေးပါ
apply နှိပ်ပြီး ok ဖြင့်ပြန်ထွက်ပါ
မိမိ gtalk staus တွင် show carrent music track ကို အမှတ်ပေးပါ
ဒါဆို ရင် နားထောင်နေတဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်လေးကို တဖက်မှ သူငယ်ချင်းများက မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
အထက်ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းဖြင့်မရပါက gtalk ကို uninstall လုပ်ပါ
ပြီးလျှင် gtalk setup ကို run au administrator ဖြင့် install ပြန်လုပ်ပါ
show carrent music track in gtalk staus
Gmail တွင် နေရပ်လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မွေးနေ့ မှတ်ချင်သူများအတွက်
အခု ပြောပြချင်တာကတော့ Gmail မှာ ပိုလာတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့2ခုထဲက 1 ခုကိုပြောပြချင်ပါတရ် ……
( ကျွန်တော်လည်း သိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး ….. ဂျာနယ်ထဲမှာ ပါလာလို့ ဖတ်ကြည့်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ )
အခု Gmail မှာ Contacts ဆိုတာလေး နဲ့ Tasks ဆိုတာလေး2ခုပိုလာပါတရ်
အဲ့ဒီ့ထဲက Contacts ဆိုတာကိုပြောမှာဖြစ်ပါတရ် …….
Contacts ဆိုတာကတော့ “ ဆက်သွယ်မှု့ ” ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရပါတရ်
အဲ့ဒီ့ Contacts ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့ နေရပ်လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မွေးနေ့ စတာတွေကို မှတ်သားလို့ရပါတရ်
လုပ်မရ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ့ Contacts ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် ကိုယ်အကောင့်ထဲမှာ ရှိတဲ့လူရဲ့ နေရပ်လိပ်စာ ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မွေးနေ့ ကို မှတ်ချင်တရ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ အကောင့်ကို နှိပ်လိုက်
ပြီးရင် သူ့ အကောင့် နာမည်နဲ့ မှတ်ဖို့ နေရာလေးတွေ ပါလာပါလိမ့်မရ်
ကိုယ်သိထားသမျှကို ရေးမှတ်ပြီးပြီ ဆိုရင် Save Now ကို နှိပ်လိုက်ပါ
Desktop ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Gif ဖိုင်ပုံလေးတင်ကြည့်ရအောင်
Run box မှာ control desktop လို့ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ
Desktop option အောက်က customize desktop ဆိုတဲ့ button ကို click ပါ
Desk Itoms dialog box မှ web ကို click ပါ new , New Desktop Item မှာ မိမိထည့်ချင်တဲ့
Gif file ကို browse ကနေရွေးပြီး ထည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ ok , apply, ok ပေါ့
ကျွန်တော့် တို့ Desktop ပေါ်မှာ Gif ပေါ်လာပါပြီ
ကိုလိုချင်တဲ့ နေရာမှာထားလိုက်ပေါ့ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာ
right click ထောက်ပြီး Desktop Item ဆိုတဲ့ dialog box ထိရောက်အောင်ပြန်သွား လိုက်ပါဦး
Lock desktop item ဆိုတဲ့စာသားလေး check ပေးပြီး Ok ,Apply,Ok…….
အခုဆိုရင် gif file ဟာသူငယ်ချင်းတို့စိတ်ကြိုက်ထား ထားတဲ့နေရာမှာလှပစွာနဲ့ မြင်တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်
မသိဖူးပေမယ့်..လွန်ခဲ့၂နှစ်က မိတ်ဆွေတယောက်ပြောတာ.......မယုံခဲ့ပါဘူး.. အခုတော့လည်းတကယ်ရှိတာပေါ့။
mcxeros: ဒါနဲ.java ကို css ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ သိလား ညီ
http://www.glazman.org/JSCSSP/ မှာသွားပြီး convert လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာလေးကတကယ်တမ်းလည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Google Chrome မှာမြန်မာလိုပြောင်းနည်း
Google Chrome မှာမြန်မာလိုဖတ်လို့ရရန်
Google Chrome မှာမြန်မာလိုပြောင်းနည်းလေးပါ သိပြီးသားလူတွေတော့ များမယ်ထင်ပါတယ် မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါgoogle chorme မရှိရင် ဒီနေ၇ာကယူပါ http://www.filehippo.com/download_google_chrome/download/9c8ecdad4c...ပြီးရင် install လုပ်ပြီး browser ကို ဖွင့်လိုက်ပါ ...ပထမဦးဆုံး Browser ရဲ့ setting ထဲကို ၀င်ပါမယ် အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ပါ setting ထဲ က option ထဲဝင်ပါ option ထဲရောက်ရင် Under the Hood ကိုရွေးပြီး၊ Customize fonts.. ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Customize fonts ထဲရောက်ရင် အားလုံးကို Zawgyi One font ပြောင်းပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ ဒါဆိုရင်တော့ google chrome မှာမြန်မာလိုဖတ်လို့ရပါပြီ အားလုံးပဲအဆင်ပြောကျပါစေ